नङ टोक्नुको पछाडीका ८ मनोवैज्ञानिक कारण – Khabar Silo
नङले बाहिरी प्रभाव तथा आक्रमणबाट औँलालाई बचाउने गर्दछ । नियमित रुपमा बढ्ने नङ हरेक साताजसो काट्न योग्य हुन्छन् । दैनिक हातको कामकाज गर्नेहरुको नङ भने घस्रिएर होस् वा ठोक्किएर झर्ने वा घट्ने गर्दछ । तर कतिपय मानिस भने नङलाई टोकेर नै घटाउने गर्दछन् ।सायद तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ, विश्वका करौडौँ मानिसहरु नङ टोक्ने गर्दछन् । यसरी नङ टोक्नुको पछाडी केहि मनोवैज्ञानिक कारण पनि छन् ।
१. मनोवैज्ञानिकका अनुसार धेरै चिन्तन गर्ने वा चिन्तामा रहने मानिस नङ टोक्ने गर्दछन् ।२. पट्यारलाग्दो अवस्था वा मानिसलाई मानसिक रुपमा धिक्दारी महसुस हुँदा पनि नङ टोक्न पुग्दछन् ।३. सानैदेखि नङ टोक्ने बानी परेकाले समेत पछिसम्म नङ टोक्न छाड्दैनन् ।४. मानिसहरुमा व्यक्तित्वको अस्थिरताको कमीले समेत नङ टोक्ने लत बस्छ ।
५. ठूला समस्या वा डरमासमेत समाधानको बाटो खोज्ने क्रममा मानिसले नङ टोक्दछन् ।६. आफूमा भएको रिसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन समेत मानिस नङ टोकेर शान्त बन्दछन् ।७. नङ चपाउनुको पछाडी मानिसमा भएको अतिवादी सोच, महत्वकांक्षा र हिन भावना रहने गरको मनोवैज्ञानिकहरुको ठहर छ ।८. काम नहुँदा वा मनोवैज्ञानिक रुपमा सबल नहुँदा पनि मानिस नङ टोक्ने गर्दछन् ।
जाडोयाम सुरु भइसकेको छ। बिहान र साँझ चिसो बढ्दै गएको महसुस गर्न सकिन्छ। जोडोयाममा यही चिसोका कारण धेरै मानिस बिरामी हुने गरेको पाइन्छ।चिसोकै कारण सबै भन्दा धेरै मानिसलाई रूघाखोकीले सताइरहेको हुन्छ। रुघाखोकी सँगसँगै स्वास्थ्यमा अन्य विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने गर्छन्। यो समयमा विशेषगरी स–साना बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुने गरेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। त्यसैले […]